PeerTube 3.3 dia miaraka amina fanohanana hanamboarana ny pejy fandraisana sy maro hafa | Avy amin'ny Linux
vao haingana ny famoahana ny kinova PeerTube 3.3 vaovao dia natolotra ary amin'ity kinova vaovao ity ho toy ny zava-baovao atolotra, dia ny azo atao ny mamorona pejy manokana isaky ny ohatra PeerTube. Io dia hahafahan'ny mpandrindra ohatra manondro mazava kokoa hoe inona ny ohatra navoak'izy ireo, inona ny atiny misy, ny fomba fisoratana anarana na ny tolo-kevitr'ireo safidin'ny atiny (lisitra tsy feno).
Mikasika ireo fanovana hafa izay miavaka amin'ny kinova vaovao ihany koa, dia hitantsika fa efa misy izany zarao ireo rohy fohy, ary koa ny fanohanana lisitra filalaovana, ankoatry ny zavatra hafa.
Ho an'ireo izay tsy zatra ny PeerTube dia tokony ho fantatr'izy ireo izany manolotra safidy tsy miankina mpivarotra amin'ny YouTube, Dailymotion ary Vimeo, amin'ny fampiasana tamba-jotra fizarana atiny mifototra amin'ny fifandraisana P2P sy mampifandray ireo mpizahatany mpitsidika.
Ny PeerTube dia mifototra amin'ny fampiasana mpanjifa BitTorrent, WebTorrent, izay mandeha anaty browser ary mampiasa teknolojia WebRTC handaminana fantsom-pifandraisana P2P cross-browser direct, ary ny activitation ActionPub, izay mamela ny mpizara horonan-tsary tsy mitovy hitambatra ho tambajotra federated iraisana, izay andraisan'ny mpitsidika anjara amin'ny famoahana atiny ary manana fahaizana hisoratra anarana amin'ireo fantsona ary mahazo fampandrenesana momba ny horonan-tsary vaovao.
ankehitriny, misy mpizara 900 mahery hampiantrano atiny, tohanan'ny mpilatsaka an-tsitrapo sy fikambanana isan-karazany. Raha tsy afa-po amin'ny lalàna mifehy ny fandefasana horonantsary amin'ny mpizara PeerTube manokana ny mpampiasa dia afaka mifandray amin'ny mpizara hafa na manomboka ny mpizara azy manokana izy ireo.
Fampisehoana vaovao lehibe an'ny PeerTube 3.3
Ao amin'ity kinova vaovao aseho an'ny PeerTube 3.3 ity, araka ny efa noresahintsika teo am-piandohana, ny zava-baovao lehibe dia ny fahaizana mamorona pejy manokana isaky ny ohatra PeerTube.
Miaraka aminy ao amin'ny pejy fandraisana, Azo tanisaina ny mombamomba ny tranokala, ny atiny misy, ny tanjona ary ny famandrihana. Amin'ny ankapobeny dia azo apetraka izy io:
mpilalao natsangana ho an'ny horonan-tsary na playlist
horonan-tsary, lisitry ny playlist na fantsona sary kely
lisitr'ireo horonan-tsary nohavaozina ho azy (miaraka amin'ny fahafaha-manivana amin'ny fiteny, sokajy ...)
Ankoatr'izay dia azo atao ny mampifangaro ny bokotra, ny mpilalao video, ny playlists, ny sary kely ary ny fantsona amin'ny pejy.
Fanampin'izay, ny lisitry ny horonantsary natsangana dia havaozy ho azy. Ny fanampiana pejy fandraisam-bahiny dia atao amin'ny alàlan'ny menio Administration / Settings / Home page amin'ny Markdown na endrika HTML.
Ny iray amin'ireo fanovana izay misongadina amin'ity kinova vaovao ity dia ny fanampiana amin'ny fikarohana playlists, izay hita taratra amin'ny valin'ny fikarohana rehefa mizaha ny PeerTube sy rehefa mampiasa ny motera fikarohana Sepia.
Ankoatr'izay koa nanampy fanampiana amin'ny fandefasana rohy fohy kokoa amin'ny horonan-tsary sy lisitra playback, na dia tsy fohy aza ny rohy, ny zavatra natao dia ny fanovana ireo mpanondro horonantsary default (GUIDs) Tarehintsoratra 36 ary afaka havoaka amin'ny endrika 22 ary raha tokony ho ny làlana "/ videos / watch /" sy "/ videos / watch / playlist /" dia nohafohezin'ny: "/ w /" sy / w / p / ".
Etsy ankilany, afaka mahita izany koa isika fanatanterahana ny fanatsarana ny zava-bita, izay mamela ny famerenana ny mombamomba ny horonan-tsary dia haingana indroa izao, ho fanampin'ny fampisehoana dia nohatsaraina ihany koa tamin'ny fangatahana federasiona. Ny asa dia atao mba hamantarana ireo olana amin'ny rafitra misy mpampiasa maro, horonan-tsary ary fifandraisana amin'ny teboka hafa.
Marihina ihany koa fa ny interface dia namboarina ho an'ny fiteny RTL (avy eo ankavanana ka hatramin'ny ankavia) dia noforonina, izay anohanan'ny PeerTube ny lamin'ny RTL ankehitriny raha toa ka amboarinao ny interface PeerTube amin'ny iray amin'ireo fiteny manomboka amin'ny ankavanana kavia. Mikisaka miankavanana ny menio ary ara-drariny ny thumbnails.
Farany, raha liana hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao momba an'ity kinova PeerTube vaovao ity na amin'ny ankapobeny momba azy io, azonao atao ny manamarina ny antsipiriany Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » PeerTube 3.3 dia miaraka amina fanohanana hanamboarana ny pejy fandraisana sy maro hafa